Apple waxay u dabbaaldegtaa Sannadka Cusub ee Dayaxa iyo Bisha Madoow oo leh caqabado ku wajahan Apple Watch | IPhone News
Apple Watch ayaa maalin walba na raacda oo sameeya guuritaanku waa mid aad iyo aad u dhib badan iyo ujeedo aan ahayn waajib. Mid ka mid ah sababaha xaqiiqadan ayaa ah isu-dhowaanshaha watchOS ee isticmaalaha iyo tirada 'caqabadaha' ama faragelinta isticmaalaha. Dhab ahaan, Bishiiba mar waxa jira caqabado hawleed oo xidhiidhsan taas oo kuu ogolaanaysa inaad hesho abaal-marinno, billado iyo dhejisyo si aad ugu muujiso apps-ka iOS qaarkood. Imaatinka bisha Febraayo waxay la socotaa caqabadahan cusub ee la xiriira Sanadka Cusub ee Dayaxa kaas oo bilaabmaya 1-da February, oo ah maalinta uu Bisha Taariikhda Madoow. Labadan ujeedo ayaa fure u ah caqabadaha cusub ee hawsha Apple.
Bisha Taariikhda Madow iyo Sannadka Cusub ee Dayaxa, caqabadaha cusub ee Apple Watch
Sida aan ka faallaynay, Caqabadaha waxqabadka Apple Watch waxay u ogolaadaan isticmaaluhu inuu helo billado iyo dhejisyo marka ay dhamaystiraan ujeeddada. Apple waxay bishiiba mar ka dhigtaa tartan shaqsiyeysan oo uu heli karo isticmaaluhu. Si kastaba ha ahaatee, waqti ka waqti waxay bilaabaan caqabadaha caalamiga ah si aad u hesho koobab u dabbaaldegaya dhacdo caalami ah sida Sannadka Cusub ama Maalinta Beeraha Dabiiciga ah ee Adduunka.
Ku dar fareem iPhone kaaga, iPadka ama Apple Watch la qabsashada Picew
Bisha February ayaa keenta laba caqabadood oo hawleed oo cusub Isticmaalayaasha. Midka ugu horreeya ee iyaga ka mid ah ayaa ujeeddadoodu tahay in la xuso Sannadka Cusub ee Dayaxa ama Sannadka Cusub ee Shiinaha Sannadkan waxa uu bilaabmayaa 1-da February. Loolankaas, Apple waxay waydiisanaysaa isticmaaleyaasha inay jimicsi sameeyaan ugu yaraan 20 daqiiqo inta u dhaxaysa Febraayo 1 iyo 15 si ay u kasbadaan calaamadda oo ay u dhammaystiraan tartanka.
El dhacdo kale in la xuso waa Bisha Taariikhda Madow, xaflad ka dhacda wadamada qaar sida Canada, UK ama Maraykanka oo lagu xuso munaasabado muhiim ah iyo dadka midabka madow. Halka wadamada qaar sida Nederlaan ay bishan October ku beegan tahay, haddana dalka Maraykanka waxa laga xusaa bisha taariikhda madow ee February. Ujeedada loolanka, kiiskan, waa xidh giraanta Mooshinka (casaanka) 7 maalmood oo xiriir ah bisha Febraayo.
Caqabadahan ayaa bilaabay inay u muuqdaan qaar ka mid ah isticmaalayaasha laakiin Wali lama oga inay noqon doonaan caqabado caalami ah. Sababtoo ah Isbaanishka, tusaale ahaan, sanadka cusub ee Lunar ama Bisha Taariikhda Madow midna lagama xuso. Markaa waxay u badan tahay in Apple uu go’aansaday inuu xaddido caqabadahan dhaqdhaqaaqyada ah ee dalalka qaarkood, sida kiiska caqabadaha kale ee caalamiga ah sanadka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay u dabbaaldegtaa Sannadka Cusub ee Dayaxa iyo Bisha Madaw oo leh caqabado cusub oo Apple Watch ah
Fur Shot on iPhone Challenge ee iPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max isticmaalayaasha